Mi Nyein (sister of Lt. Colonel Aung Win Khaing) is married to the favourate nephew of Daw Kyaing Kyaing (wife of Former Senior General Than Shwe.) | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeMi Nyein (sister of Lt. Colonel Aung Win Khaing) is married to the favourate nephew of Daw Kyaing Kyaing (wife of Former Senior General Than Shwe.)
Mi Nyein (sister of Lt. Colonel Aung Win Khaing) is married to the favourate nephew of Daw Kyaing Kyaing (wife of Former Senior General Than Shwe.)
February 16, 2017 February 16, 2017 drkokogyi
Credit.. Original uploader
ဒီသတင်းတွေတင်ပေးတာ ကျနော့်တွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပေမယ့် အားလုံးသိသင့်တယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်တယ်
အောင်ဝင်းဇော်ကို သံလွင်တံတားပေါ် ဖမ်းမိစဉ်က ကားမောင်းပို့တဲ့ ဝင်းထွန်းဆိုတာ သူတို့အကို အောင်ဝင်းထွန်းတဲ့ ခင်ဗျ
သူ့ကိုယ်ပိုင်ကားတဲ့ ခင်ဗျ မောင်နှမတွေက
၁ – အောင် ဝင်း ဦး
၂ – မအေး
၃ – အောင်ဝင်းထွန်း
၄ – အောင်ဝင်းဇော်
၅ – အောင်ဝင်း ခိုင်
၆ – မအေးငြိမ်း ( ခ ) မိငြိမ်း အား လုံး မောင် နှမ ခြောက် ယောက် ရှိ တယ် ခု မိငြိမ်းတို့ လင်မယားကတော့ နိုင်ငံခြားသွားနေတယ် ကြားပါတယ် (copy)
Note: Mi Nyein is married to the favourate nephew of Daw Kyaing Kyaing (wife of Former Senior General Than Shwe)
ဒီလူကြီးက ၃ ပွင့်တုန်းက မိထ္ထီလာမှာ ခဏခဏတွေ့ဖူးပါတယ် မှတ်မှတ်ရရ တိုင်းမှူးက ဦးဌေးဦးဖြစ်တာ မှတ်မိနေတယ် တပ်မ ၉၉ ရေကူးကန် ကာရာအိုကေဆိုင်မှာ အမြဲလိုတွေ့ရတာ
Aung Myin ThuFollow
ok ဒါဆို သတင်းထုတ်လိုက်တော့မယ်
အမျိုးသားရေးဆရာတော်…တဲ့
အမျိုးသားရေးလုပ်မယ်…တဲ့
အမျိုးသားရေးဘဲလုပ်ပါမယ်…တဲ့
အမျိုးသားရေးကို သစ္စာမဖောက်…တဲ့
သူတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေတူနေကြတာလား
ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရတဲ့အမှုမှာ သမ္မတရုံးအနေနဲ့ ၊ကြားထဲက ငထွားခါးနာရမဲ့ကိန်းတော့ဆိုက်နေပြီ။အမှန်က ဒီအမှုဟာ ပြည်ထဲရေး
အမှုဖြစ်စဉ်ကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ပြည်သူလူထုသိရှိရအောင်
ဒါကို မဆီမဆိုင်သမ္မတရုံးကနေ ဘာကြောင့် ဓားစာခံဝင်လုပ်နေရသလဲ။
ပြည်သူလူထုသိအောင်၊အမြန်ထုတ်ပြန် ကြေညာပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကို သမ္မတကြီးက အမိန့်ပေးထားပြီးသားပါ။အခုမှဘာကြောင့် သူများအဆင်သင့်ရေးလာတဲ့ စစ်ဆေးချက်ဆိုတာတွေကို သမ္မတရုံး နာမည်တပ်ပြီးထုတ်ရသလဲ)
အခုဒုတိယမြောက်ထွက်လာတဲ့ ဦးကိုနီအမှု အပေါ်ကြေညာချက်ကိုကြည့်ရင်၊
ပထမကြေညာချက်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဖန်တီး ရေးသားထားတဲ့
အမှုတွဲဖြစ်နေရင်ဒီကိစ္စကို ပြည်ထဲရေးက နာရီပိုင်းအတွင်းသိရမယ်။
ပိုပြီးသိဖို့ကောင်းတဲ့အချက်က အဲဒီညီဟာ အာဏာပါဝါရှိတဲ့သူ။
ဒါကြောင့် ဒုတိယထွက်လာတဲ့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်ဟာ မရိုးသားဘူး။
တဲ့တဲ့ပြောကြကြေးဆိုရင် အောင်ဝင်းခိုင်ဆိုတာ ဒုတိယမြောက်ကျားစာကျွေးခံရတဲ့
ကောင်ပဲ။ဒီလူလူ့ပြည်မှာ ရှိနေသေးသလားဆိုတာ မသေချာတော့ဘူး။
အောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့အထက်မှာ ကြီးကြီးမာစတာထဲက တရားခံတွေ ရှိကိုရှိရမယ်။
ကျွန်တော်တကယ့်ကို ရင်ထဲအသည်းထဲက ယုံကြည်ချင်ပါတယ်။
Aung Zar Ni
အောင်ဝင်းခိုင်လက်နက်ဝယ်တဲ့နေရာ အုန်းဖန် ဒုက္ခသည်စခန်း
ဆိုတာ အခု အဘလှဆွေ သွားခဲ့တဲ့ DKBA ဌာနနဲ့နီးနီးလေး။
အဘက ဇန်န၀ါရီ ၁၀ ရက်ကမှ သွားခဲ့တာဆိုတော့
အဘသာ ကူမယ်ဆိုရင်ဖြင့် နာမည်ကောင်းလက်မှတ်တွေ
လွတ်မြောက်နေသူဟာ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီက လို့ ဒေါပုံ မြို့သားတွေက ပြောပါတယ်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ ရုံးချုပ်အား
ဦးကိုနီသတ်ဖြတ်မှု နောက်ကွယ် မာဖီးယား
သန်း (၄၀၀) ဖြင့် ၀ယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း
သတင်း ၁၀၀% ရရှိသည်။
အရမ်းကြီးတဲ့ မာဖီးယား အုပ်စုပါ
မထိရဲ မတို့ရဲ့ပဲ လွှတ်ထားပါတယ်
ကာချုပ်ကြီး ၀န်ခံပေးဖို့ ကျနော် တောင်းဆိုပါတယ်
ကျနော် အစောကြီးထဲက ပြောပါတယ်
မာဖီးယား အုပ်ချုပ်သော နိုင်ငံတော် ဆိုတာကို
ထုတ်ပြန်လာလျင် ကျနော် ဆက်ထောက်ပြမယ်လို့
အားလုံး စာဖတ်သူများကို ကျနော် ကတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။
၀ ဒေသကနေ တရုတ်ပြည်ထဲရောက်နေတယ်
ကျနော် ဒီပို့စ်တင်ပြီးလို့ ပြန်ပြေးလာရင်တော့မသိဘူး
အမေရိကန်မှာ သူနဲ့ ချိပ်ဆက်ထားတဲ့
ဒေါ်စုကို ခွေးနဲ့ နိုင်းပြီး ဗွီဒီယိုဖိုင်တောင်
အဲဒီဆူရှိသမားက တင်ပြခဲ့သေးတာပဲ ….
(ဘိုလို) ပြန်ပြီး ပေးထားပြီးပြီ
အခု အိမ်ဘေးမှာ အမြဲရှိပါတယ်
ပိုပြီးတော့ လုံခြုံတယ် …သို့သော် ဆက်လုပ်ရမယ်
မာဖီးယား အုပ်ချုပ်ရေးမှ ပြည်သူအများ လိုလားသော
လက်ရှိ ပို့စ်တွေ တင်နေပါတယ်
ဆရာချစ်ဦးညို ၀တ္ထုနဲ့ ထောက်ပြနေပါတယ်
ကရင်ခလေး ၀တ်စုံနဲ့ ပရိုဖိုင်းပါ
တပ်မတော်ရော ပြည်ထဲရေးရော သူ့ကို ဘာမှ မလုပ်ဘူးဗျ
အဲဒါ မာဖီးယားလို့ ကျနော်ပြောတာ လွန်သလားဗျာ
13 hrs · Kuala Lumpur ·
ကြေငြာချက်မှာ ဘာဖြစ်လို့ဖုံးကွယ်ထားသလဲ
သမ္မတ ရုံးက သတင်းထုတ်တာမှာ
အောင် စိုး က ပြန်ဆက် သွယ် ခဲ့ သော် လည်း သတ် ရ မယ့် သံတမန် ပြန်သွားပြီလို့ အောင် ဝင်း ဇော် က ပြောသတဲ့
အောင် စိုး ပြောတာက သူ ငြင်းခဲ့ တယ် တဲ့
ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတခုက မထင်မှတ်ဘဲ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်မိ ပါတယ်ဆိုတဲ့
တိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ထားသူဟာ
ဘယ်အဖွဲ့အစည်းက ဘာတာဝန်ရှိတဲ့သူ ဘယ်သူဆိုတာကို
တရားခံနဲ့ အမှုနဲ့ပတ်သက်သူမှန်သမျှဟာ
တရားခံ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့ပုံဟာ
ထောက်လှမ်းရေးတပ်မှူးပြု တ်ဗိုလ်ချု ပ်ကြီးဟောင်း
ခင်ညွန့်ပိုင် ပန်းချီ ပြခန်းထဲမှာ ရိုက်ကူးထားတာ….
ဒီလိုအခြေအနေမှာ ယမန်နေ့က ကလေးမြို့ မှာ
ခင်ညွန့်က ဝီရသူနဲ့ သီးသန့် သွားတွေ့ခဲ့ပါတယ်
၂၀၁၂ခုနှစ်က ရန်ကုန်မှာ ဝီရသူနဲ့ ခင်ညွန့် တရားပွဲ
တခုအပြီး တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက် တိုင်းပြည်မှာ ဘာတွေ
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရပြီးတဲ့အချိ န်က ဝီရသူက သူ့ရဲ့
FB မှာ ဘာရေးခဲ့ပါသလဲ
Soe Min ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ကငွေတွေဘယ်ကရတာလဲ တပ်ကတွက်ပြီးဘယ်သူထံမှာတပည့်ခံနေတာလဲဆိုတာသူမိမှသိမှာလား ဘယိသူနဲပေါင်းတယ်ဆိုတာရော?
Ko Nyo added9new photos.
ဦးကိုနီအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု နိုင်ငံတော် သမတရုံးမှ နောက်ဆက်တွဲသတင်း ထုတ်ပြန်ချက်။
ဖတ်ပြီးတာနဲ့ သတိထားမိတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ခန့်မှန်းဆင်ခြင်မိတာတွေကတော့….
၁။ တရားခံပြေးဟာ တပ်မတော် ဒုဗိုလ်မှူးဘဝနဲ့ မိမိသဘောနဲ့မိမိ ၂၀၁၄ တုန်းက နှုတ်ထွက်ခဲ့သတဲ့။ တပ်မတော် အရာရှိအဆင့်တွေ မိမိသဘောနဲ့ မိမိ နှုတ်ထွက်ဘို့ လွယ်သလား ?ဆိုတာရယ်၊
၂။ ၂၀၁၄ သမတဦးသိန်းစိန်သက်တမ်းကုန်ခါနီး ( ကြံ့ဖွတ်အစိုးရ နိုင်ငံရေး မအောင်မမြင်/ လူထု မထောက်ခံ) မှာ ဘယ်လို ရည်မှန်းချက် ဗျူဟာနဲ့ တပ်က ထွက်တာလဲ? ဆိုတာရယ်၊
၃။ မှတ်တမ်းဟောင်းတွေအရ တရားခံပြေး ဗမ အောင်ဝင်းခိုင် မှတ်တမ်းပုံတခုဟာ ပန်းချီပြပွဲတခု နောက်ခံဖြစ်နေပြီး အဲဒီပြခန်းကို ထလရ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း (ဦး)ခင်ညွန့် ပိုင်ဖြစ်တယ် ဆိုတာရယ်၊
၄။ ဒီအချိန်အထိ တရားခံပြေး အောင်ဝင်းခိုင် မြန်မာ့မြေမှာ ရှိသေးလား? သတ်ခံရပြီလား? ဘယ်မှာလဲ? ဆိုတာရယ်၊
၅။ အခြေအနေ အားလုံး ပို ရှုတ်ထွေးပြီး သိမ်မွေ့လာပြီ၊ အုပ်စု တစုနဲ့တစု အပြစ်လွတ်အောင် ကောလဟလ သတင်းတွေ ဖြန့်နိုင်တယ်ဆိုတာရယ်၊
၆။ သေချာတာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလွန် နိုင်ငံရေးအာဏာရယူနိုင်ဘို့ အခုကတည်းက တပ်ထွက် ဗိုလ်ချုပ်အုပ်စုနဲ့ ကြံ့ဖွတ် အသိုင်းအဝိုင်းတွေ ဆင်ကြံ ကြံနေကြပြီ။ သူတို့ လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ စီမံကိန်းတခုကို( ဒုစရိုက်မှုမကင်း/ နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်/ စီးပွားရေး မတည်မငြိမ်/ စစ်ရေး- တိုင်းရင်းသားအရေး မတည်မငြိမ် နဲ့ အလားတူ ရာဇဝတ်မှုများ) ကို စတင် အကောင်အထည် ဖော်နေကြပြီ ဆိုတာပါပဲ။ ရန်သူက သူတို့ရဲ့ အဖျက်အမှောက်စီမံကိန်းတွေကို စတင် လုပ်နေတာ သေချာပါပြီ။
နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ပြည်သူတွေ သတိသာမက သတ္တိပါ ရှိဘို့ လိုပါတယ်။
သိပ်အများကြီး မလိုဘူး သိန်း၁၀၀၀ ပေးတဲ့သူ ဘယ်ကနေ အဲဒီငွေရသလဲ မေးယုံပဲ။
← Assassination of Padoh Mann Sher had changed my relations with the Burma Digest
“မဟောသဓာဇာတ်တော်ကြီးကို နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်စော၍ ခိုးထားသော ဆော်လမွန် ဘုရင်ကြီး “ →
9 thoughts on “Mi Nyein (sister of Lt. Colonel Aung Win Khaing) is married to the favourate nephew of Daw Kyaing Kyaing (wife of Former Senior General Than Shwe.)”
D Min Swe
ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံဖို့ ငွေပေးစေခိုင်းသူ အသက် (၄၅)နှစ်အရွယ် ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်ဟာ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ၀ါဆိုရပ်ကွက်၊ မဏ္ဍိုင်လမ်း၊ အိမ်အမှတ် (၃၃) မှာ နေထိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ဝင်းခိုင်ကို ဦးကိုနီလုပ်ကြံမှု မတိုင်ခင် နှစ်ရက်က နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ အိမ်နီးချင်းတွေက ဖြေကြားထားပြီး သူနေထိုင်ရာ သုံးထပ်တိုက်အိမ်ထဲမှာတော့ မိသားစုရှိတယ်လို့ ယူဆရကာ ခြံနဲ့အိမ်တံခါးကို ပိတ်ထားတယ်လို့ 7Day Daily သတင်းစာကြီးက ဖော်ပြထားပါတယ်။
အောင်ဝင်းခိုင်ဟာ တပ်မတော်မှာ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်နဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ ၂၀၁၄ မှာတော့ မိမိသဘောဆန္ဒနဲ့ နုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အောင်ဝင်းခိုင် ဒုဗိုလ်မှူးကြီးရာထူးမှ နုတ်ထွက်တဲ့ နှစ်မှာပဲ သူ့ရဲ့အစ်ကို အောင်ဝင်းဇော်နဲ့ကြည်လင်းတို့လည်း အိုးဘိုထောင်မှာ ဘုရားခိုးမှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရာမှ သမ္မတရဲ့လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ဝင်းခိုင်ဟာ အဆိုပါ ၀ါဆိုရပ်ကွက်၊ မဏ္ဍိုင်လမ်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ခန့်က ပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပြီး သူနဲ့ဆွေမျိုး တော်စပ်သူတွေဟာ အဆိုပါ ရပ်ကွက်မှာ ရှိနေပြီးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိနေထိုင်တဲ့ သုံးထပ်တိုက်ဟာ အောင်ဝင်းခိုင် တပ်မတော်မှ နုတ်ထွက်ပြီးတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခန့်ကမှ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခြင်းဖြစ်ကာ အဆိုပါမတိုင်မီက အိမ်ငှားပြီး နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇနီးနဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သားနှစ်ဦးရှိပြီး ရပ်ကွက်အတွင်း အောင်ဝင်းခိုင်တို့မိသားစုဟာ အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့ အကျွမ်းတ၀င်မရှိဘဲ သီးသန့်နေထိုင်သူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူလို့ အိမ်နီးချင်းအချို့က ဆိုကြပြီး ၀ါတွင်းသုံးလ အရုဏ်ဆွမ်းလောင်းချိန်မှာ ပုံမှန်ဆွမ်းလောင်းသူဖြစ်ကာ ပဋ္ဌာန်းနဲ့တရားစာတွေ ရွတ်ဆိုနေလေ့ရှိကြောင်း ဆွမ်းလောင်းအသင်း ပါဝင်သူတွေကဆိုပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့အဆိုအရ အောင်ဝင်းခိုင်နဲ့အောင်ဝင်းဇော်တို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးဟာာ သွားသွားလာလာရှိပြီး ၀ါဆိုရပ်ကွက်ထဲမှာ ကားဝပ်ရှော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြကာ ကျောက်တံတားမြို့နယ် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းမှာလည်း မိသားစုပိုင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်တစ်ခုရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံမှုမှာ မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အငှားယာဉ်မောင်းကိုသီဟက အောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့ကားလို့ ယူဆရတဲ့ ဟာရီယာအနက်ရောင်ကို အဆိုပါနေ့က တွေ့ခဲ့တယ်လို့ ပြောထားကြောင်း 7Day Daily သတင်းစာကြီးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကိုသီဟရဲ့အဆိုအရ တရားခံကြည်လင်းဟာ ဦးကိုနီကို သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်အပြီး ထိုကားအနက်ရောင်ဆီပြေးသွားကာ မှန်ကို ပုတ်ခဲ့ပေမဲ့ ကားက တံခါးမဖွင့်ပေးခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ကိုသီဟအပါအ၀င် လေဆိပ်မှ မျက်မြင်သက်သေအများစုဟာ အဆိုပါကားအနက်ရောင်အကြောင်းကို ထုတ်ပြန်ချက်ထွက်လာပြီးမှ ပြောကြားတာမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့ ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက်ကတည်းက ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုကိစ္စဟာ အင်မတန်ရှုပ်ထွေးနေပါတယ် မယ်တော်ကြီးရဲ့တူအရင်းတွေပါနေသလိုစစ်ထောက်လှမ်းရေးပြုတ်တွေအပြင် အာဏာလက်ရှိအသိုင်အဝိုင်းတွေပါနေပါတယ် fbပေါ်ကသတင်းတွေဟာခိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်
NY ကအောင်နိုင်ထွေးဟာ အရမ်းတိကျတဲ့သတင်းတွေရနေပါတယ် သူ့POST မှာ ပတ်သက်သူတွေထဲမှာ ဒုဝန်ကြီး တွေစစ်ထောက်ချုပ်နဲ့ခရိုနီကြီးတွေ ပေါက်ယူချန်းလိုလူတွေပတ်သက်နေတာကိုအတိအကျရေးထားပါတယ် ဒီလူသတ်မှုထဲပါတဲ့သူတဦးဟာအမေရိကန်မူးယစ်ထောက်လှမ်းရေး DEA,မှာနာမည် ၄ မျိုးရှိပါသတဲ့ ဒီသတင်းတွေဟာအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးရပ်ကွက်ကသူဂနေတာသေချာပါတယ်
ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကစိတ်ဝင်စားနေတာ ကျနော်ရေးပါတယ်ဦးကိုနီအသက်ပေးရတာအလကားမဖြစ်ပါဘူးလို့ ဒါပေမဲ့ Profile အမှန်နဲ့ရေးတဲ့သူတွေသတိထားရေးပါ လက်တံရှည်တယ် မနေ့ကဥက္ကလာမှာရဲကိုကားနဲ့တိုက်သတ်တဲ့လူရဲ့အဖေက ဒီအုပ်စုဘဲတဲ့ လက်ရဲဇက်ရဲနိုင်တာကြည့်ပါ
” တရားချင်းယှဉ် ရှုံးနှင့်ပြီးသား ”
ဆရာရန်ကုန်ဘဆွေ ရဲ့ ‘မြန်မာပြည်သား’ ဝတ္ထုထဲမှာ ကောင်းမြတ်နဲ့ စံလှကြီး တို့ တယောက်တလှည့် ထောင်းတမ်းစိန်ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီခေတ်ယောက်ျားတွေ တယောက်နဲ့ တယောက်သတ်ပုတ်နည်းထဲမှာ အပြန်အလှန်ထိုးကြိတ်တာထက်ကို ပြင်းထန်တဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှု တခုပါ။ တယောက်တလှည့် ကျောကုန်းပေးပြီး အပေါ်ကနေ တံတောင်နဲ့ထောင်းကြတာ။ ကောင်းမြတ် က လူကောင်သေးသေး၊ စံလှကြီးက အကောင်ထွားထွား၊ လူကောင်ချင်းမမျှပေမဲ့ အဲသလို စိန်ခေါ်ပြိုင်ကြတယ်။
ကောင်းမြတ် ခံလှည့်တိုင် စံလှကြီး က လေထဲခုန်ပြီးကို တံတောင်နဲ့ အုန်းခနဲ၊ အုန်းခနဲ နေအောင် ထောင်းတယ်။ ကောင်းမြတ်က မြေပေါ်ဗိုင်းခနဲ လဲကျ၊ ပါးစပ်က သွေးတွေ ယိုစီးကျရဲုမက တချက်တချက် သတိလစ်သွားတယ်။ မိနစ်နည်းနည်းကလေးငြိမ်နေရာက သတိပြန်ရတာနဲ့ လူးလွန့်ပြီး ပြန်ထ ဒယီးဒယိုင်နဲ့ ပြန်ထောင်းဖို့ ဒရွတ်ဆွဲလာတယ်။
စံလှကြီးက သူ့အလှည့်မှာသာ အားကုန်ထောင်းတာ သူခံအလှည့်ဆို ကျောကို ဘယ်ယိမ်းညာယိမ်းနဲ့ တိမ်းရှောင်တယ်။ တချက်တလေ ကောင်းမြတ်ဟာ စံလှကျောကို ထိတောင် မထိနိုင်ဘဲ သူ့အရှိန်နဲ့သူ ဟပ်ထိုးလဲတဲ့အထိ ဖြစ်ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူအထောင်းခံအလှည့် ကျရင် ကျောကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ကုန်းပေးတယ်။ သပြေသီးမှည့်ကြီးလို ညိုမည်းနေတဲ့ တံတောင်ထောင်းရာကြီးက မမြင်ဝံ့စရာ။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းမြတ်က ဆက်ယှဉ်ပြိုင်နေဆဲဖြစ်တယ်။
သူတို့ပြိုင်ပွဲကို ကာလသားကြီးတွေ ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့
ဆက်ပြိုင်စရာမလိုတော့ဘဲ ပြိုင်ပွဲဟာ အနိုင်အရှုံးပေါ်သွားတော့တယ်။ တအုန်းအုန်းထောင်းနေတဲ့ စံလှကြီးကို
ပြိုင်ပွဲစချိန်မရှေးမနှောင်းပါပဲ ရှုံးခဲ့ပြီးသား သတ်မှတ်ကြတယ်။ ထောင်းတဲ့အလှည့်ထောင်းရဲသလို၊ ခံတဲ့အလှည့် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ခံမှ စည်းကမ်းနဲ့ညီတဲ့ပြိုင်ပွဲ တဲ့။
” ဒီအတိုင်းတလျှောက်လုံးပြိုင်လာတာဆိုရင်တော့ စံလှ မင်းက အစောကြီးကထဲက ရှုံးနှင့်င်္ပြးသား” တဲ့။
ခင်ဗျားတို့ စစ်အုပ်စုဟာလဲ စံလှကြီး ညစ်သလိုညစ်ပြီး အစောကြီးကထဲကကို ရှုံးပြီးသား လို့ ပြောချင်တယ်။
သတင်းသမား ကိုလဲ ပစ်သတ်၊
ဥပဒေသမား ကိုလဲ ပစ်သတ်၊
စာပေ အနုပညာသမားတွေ ကိုလဲ ဖမ်းဆီး နဲ့။
သတင်းကို သတင်းနဲ့ မယှဉ်ဝံ့။
ဥပဒေကို ဥပဒေနဲ့ မယှဉ်ဝံ့။
စာပေအနုပညာ ကို စာပေအနုပညာနဲ့ မယှဉ်ဝံ့ ဘဲ၊
ထစ်ခနဲရှိ ပစ်ခတ်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးဖို့ပဲ တတ်တဲ့ သူရဲဘောကြောင် အန္ဓတွေ။
ခင်ဗျားတို့ ဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ရှုံးပြီးရင်းရှုံးနေတဲ့ လူတွေပါပဲ။
လူမျိုး ခြား ဘာသာခြား တယောက် တိုင်းပြည်ရဲ့ အသက်သွေးကြော ဖြစ်တဲ့ လက်ရှိ ခေါင်းဆောင်တွေကို ချယ်လှယ်ချူပ်ကိုင်နေတဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းပြည်နှင့် အမျိုး၊ ဘာသာ၊သာသနာ ချောက်ထဲ မကျအောင်
မိမိတို့ ဒီလို လုပ်ကြံဖို့ အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၊
မိမိတို့ ဒီလို လုပ်ဆောင်ခဲ့အတွက် နောင်တမရကြောင်း၊
ဒိအတွက် ပေးလာတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို လဲ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး အတွက်
ခံရတာဖြစ်လို့ ကျေကျေနပ်နပ် ကြီးခံယူသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း..
အထူးတရား၇ုံးတင်စစ်ဆေး ၃ နှစ်ကျော်ကြာ…
ကြည်လင်းနဲ့ အပေါင်းအပါများကို ထောင်ဒဏ် ၁ သတ်တကျွန်းချ
ထောင်ကျပြီး ၁ နှစ်အကြာ ယခင် စစ်ဗိုလ်ချူပ်ကြိးဟောင်း တဦး သမ္မတဖြစ်လာ
သမ္မတ ၏ အထူး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လုပ်ကြံသူများ ပြန်လွတ်လာ
(ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ဝတ္ထုရေးဖို့ စိတ်ကူးနေတာ :P)
အင်ပါယာကြီးတွေ၊မက်ဂါကော့ပ်တွေ လို အင်မတန်
ခိုင်မာတဲ့ အဖွဲ့စည်းကြီးတွေ ပြိုကွဲတဲ့ အစဟာ
သိပ်ကြီးကြီးမားမား မဟုတ်တဲ့ သေးငယ်တဲ့ အမှား
လေးက စ ပါတယ်။
နောက်တော့ တစတစ နဲ့ ထိန်းမန်ုင်အောင်ပြိုကျ
ရေကျော်သေးသေး လေး က အစပြုပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ထိန်းမရတဲ့ ကျိုးပေါက်မှု ကြီးတွေ
We hope and pray that In Sya Allah that will lead to the downfall of Veteran Organization, USDP, U Pine, Swarn Arr Shins and Ma Ba Tha.
We need to follow the money trail as the Lt Colonel had disappeared. We need to freeze his bank accounts and scrutinise who paid him (who employed him), who worked for him (who he paid) and who are his business associates etc. @ money trail =noun
A series of connected financial transactions and exchanges, especially when revealed during the investigation ofacrime.
Myanmar Update News Agency – မြန်မာ့သတင်းထူးသတင်းဦးများ added2new photos.
ထက်ခေါင်လင်း/ Myanmar Now 16/02/2017
ရန်ကုန် (Myanmar Now) – ရှေ့နေဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ စီစဉ်ပြီး လွတ်မြောက်နေသူတစ်ဦးအဖြစ် အစိုးရက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့ ဦးအောင်ဝင်းခိုင် ရန်ကုန်မြို့နေအိမ်ကနေ ထွက်ပြေးဖို့ အချိန် ဘယ်လောက် ရပါသလဲ။
မှ – Myanmar Now
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ဝ ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ဒေါပုံမြို့နယ် ဦးအောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့ နေအိမ်ရှေ့မှာ ရပ်ထားတဲ့ မော်တော်ယာဉ် (ဓာတ်ပုံ – အောင်ငြိမ်းချမ်း/Myanmar Now)
အောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့ ညီမ မငြိမ်းဟာ
ဗိုလ်ချု ပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (ငြိမ်း)ရဲ့ ဇနီးဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ရဲ့တူအရင်း ဝင်းတင်နဲ့လင်မယားတွေဖြစ်ပြီး
မအေးရဲ့ယောကျာင်္းကတော့
ဗိုလ်မှူးအုန်းဟန် (ငြိမ်း)လို့
မိသားစုနဲ့နီးစပ်တဲ့ရပ်ကွက်နေပြည်သူအချို့ဆီကသိရပါတယ်။
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ –
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချု ပ် ဥပဒေအကြံပေး
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ ငွေပေးခိုင်းစေသူ
ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်တို့မိသားစုက
အိမ်ဂရမ်အပေါင်ခံ ငွေတိုးချေးစားတဲ့လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ ငွေပေးခိုင်းစေသူဟာ
ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက မနေ့က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း အောင်ဝင်းခိုင်ဟာ
ဒေါပုံမြို့နယ် ဝါဆိုရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အောင်ဝင်းခိုင်တို့မိသားစုက ငွေတိုးချေးစားတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ အဆိုပါရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
“သူတို့ပြောင်းလာတာမကြာသေးဘူးလေးနှစ်လောက်ရှိပြီ အဲ့ဒီဗိုလ်ချု ပ်ကတော့ ဘာမှမလုပ်ဘူး သူတို့မိသားစု တစ်ခါတစ်လေ ရပ်ကွက်ထဲ လမ်းထွက်လျှောက်တယ် သူ့မိန်းမကတော့ ငွေတိုးပေးစားတယ် “လို့ ရပ်ကွက်နေပြည်သူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဇန်နဝါရ်ီလ ၂၇ ရက်နေ့ကတည်းကအောင်ဝင်းခိုင်ဟာနေအိမ်မှာ
“ဦးကိုနီအသတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ သူတို့အိမ်ကို ရဲတွေကော ထောက်လှမ်းရေးတွေကော လာတယ် သူ့မိသားစုကတော့ မနေ့ညကထိတောင်ရှိသေးတယ်။
အောင်ဝင်းခိုင်ကတော့ မဖြစ်ခင် နှစ်ရက်လောက်ထဲက ပျောက်သွားတာ
အရင်ဆိုရင်တော့ ဒီဖက်ကမ်းနားမှာ လမ်းထွက်ထွက်လျှောက်တယ်
တရားခွေဖွင့်ပြီး သူတို့မိသားစုတွေက ဒီကရပ်ကွက်တွေထဲမှာ
ဝယ်တယ်ရောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ရပ်ကွက်အုပ်ချု ပ်ရေးမှူးလည်းမခေါ်ဘူး ။
သူ့ညီမမငြိမ်းဆိုရင် ဘိလပ်မြေစက်ရုံတွေထောင်ထားတယ်လို့ကြားတယ် “လို့ သူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ညက
အောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့နေအိမ်ကို ရဲဌာနမှဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကိုအောင်ဝင်းခိုင်တို့မှာ မောင်နှမ ခြောက်ယောက်ရှိပါတယ်။
သူတို့က(၁) အောင်ဝင်းဦး၊(၂)မအေး၊(၃)အောင်ဝင်းထွန်း၊(၄)အောင်ဝင်းဇော်၊(၅)အောင်ဝင်းခိုင်နဲ့(၆)မအေးငြိမ်း ခေါ် မိငြိမ်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့ အမနဲ့ ညီမတွေဖြစ်တဲ့ မငြိမ်းနဲ့မအေးတုိ့ အဆိုပါရပ်ကွက်တွေမှာအိမ်အဝိုင်းတွေအများအပြားဝယ်ယူထားတဲ့သူများဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“သူတို့တွေက ဒီမှာ အိမ်ဝိုင်းတွေက မရှိဘူးဆို နှစ်ဆယ်ကျော်တယ် တခြားရပ်ကွက်တွေမပါသေးဘူး “လို့ မငြိမ်း၊မအေးတို့နဲ့မိသားစုလိုနေထိုင်တဲ့ ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့ ညီမ မငြိမ်းဟာ ဗိုလ်ချု ပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (ငြိမ်း)ရဲ့ ဇနီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ရဲ့တူအရင်း ဝင်းတင်နဲ့လင်မယားတွေဖြစ်ပြီး
မအေးရဲ့ယောက်ျားကတော့ ဗိုလ်မှူးအုန်းဟန် (ငြိမ်း)လို့ ……..
မိသားစုနဲ့နီးစပ်တဲ့ရပ်ကွက်နေပြည်သူအချို့ဆီကသိရပါတယ်။